Wararkii ugu danbeeyay ee Dhuusamareeb Ahlu-Sunna | Onkod Radio
Wararkii ugu danbeeyay ee Dhuusamareeb Ahlu-Sunna
Dhuusamareeb (Onkod Radio) –Xaalad deganaasho ahm ayaa saakay laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb, kadib dagaallo shalay ku dhex-maray ciidamada Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Xoogagga Ahlu Sunna oo soo weeraray.
Wararka ayaa sheegaya in qoysaskii ka barakacay Dhuusamareeb ay haatan bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan guryahooda, walow saameynta dagaalka laga dareemayo deegaannadaasi.
Dhaq-dhaqaaqa dadka iyo gaadiidka ayaa sidoo kale yar, waxaana magaalada weli laga dareemayaa cabsi la xiriira in markale ay ku dagaallamaaan labada dhinac.
Galmudug ayaa dhankeeda ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso magaalada oo dhan halka Ahlu Sunna aysan weli wax war ah, ka soo saarin dagaalkaasi.
Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in haatan xoogagaa Ahlu Sunna ay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Sangooy oo u dhow Dhuusamareeb, sidoo kalena kaabiga deegaanka Bohol oo ah, halkii ay horey ugu sugnaayeen ciidamada Ahlu Sunna.
Dagaalladan ayaa kusoo aaday, iyadoo Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenkiisa ay labaduba ku suganyihiin magaalada Muqdisho, halkaas oo ay qeyb ka yihiin ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya, oo dhici doonta maalinta berri ee ah, 15-ka May.
Si kastaba, Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa dhammaadkii bishii October ee hore Sannadkii 2021-kii dagaal culus looga saaray degmada Guriceel oo ay Maalmo kooban haysteen.